Qaraxyo loo adeegsaday bombooyinka gacanta laga tuuro ayaa lagu weerary sideed ka mid… – Hagaag.com
Qaraxyo loo adeegsaday bombooyinka gacanta laga tuuro ayaa lagu weerary sideed ka mid…
Posted on 14 Agoosto 2020 by Admin in National // 0 Comments
Faah faahin ayaa waxay ka soo baxeysaa qaraxyo loo adeegsaday bombooyinka gacanta laga tuuro, oo xalay lagu weeraray sideed ka mid ah, toddobo iyo tobanka degmo ee Gobolka Banaadir.
Qaraxyadan ayaa lagu weeraray xarumo degmo iyo xarumo kaloo hoos yimaada Degmooyinka Gobolka Banaadir, iyadoona ay jiraan dad ku waxyeeloobay qaraxyadaasi.
Goobaha la weeraray ayaa kala ah Xarunta Degmada Kaaraan, Waaxda Nageyle ee Degmada Kaaraan, Waaxda Calasow ee Degmada Shibis, Waaxda Siinaay ee Degmada Boondheere, Waaxda Horseed ee Degmada Yaaqshiid, Waaxda Kor-damac ee Degmada Dayniile, Xarunta Degmada Waaberi, Xarunta Degmada Wadajir iyo Xarunta Deegaanka Garasbaaley.
Laba qof oo mid uu askari yahay ayaa ku dhaawacmay qaraxa lagu tuuray Waaxda Siinaay ee Degmada Boondheere, sidoo kale laba qof oo rayid ah ayaa ku dhaawacmay qaraxa ka dhacay Garasbaaley, oo ku taala duleedka Muqdisho. Qaraxa Garasbaaley ayaa sagaal ka dhigaya goobaha la beegsaday, inkastoo magaalada ka baxsan tahay.
Ciidamada Booliska ee Degmada Shibis ayaa laba qof u soo qabtay qaraxii lagu tuuray Waaxda Calasow ee degmadaasi, kuwaa oo hadda ay su’aalo weydiinayan laamaha ammaanka.
Wariye-yaasha Magaalada Muqdisho ayaa soo sheegaya in xilligii xarumahaasi la weeraraayay, aysan jirin wax shaqo ah oo ka socotay, taasoo yareysay khasaaraha ay gaysteen.
Qaraxyada bambooyinka loo adeegsado ayaynaan ahayn markii ugu horeysay ee lagu qaado xarumo degmo, balse weerarkan waxaa uu kaga duwanaa in mar qura la beegsaday illaa sideed xarumood, oo magaalada ku yaala.